Ciidanka Xoogga dalka oo la wareegay Saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen Sh/Dhexe | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidanka Xoogga dalka oo la wareegay Saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen Sh/Dhexe
Balcad (Halqaran.com) – Cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen duleedka Degmada Balcad waxa ay ku dileen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyagoo burburiyay goob ay Gaadiidka uga qaadi jireen Lacago baad ah.
Howl-galka oo ka dhacay degaanka Danida ayay Ciidamadu Cagta ku mariyeen Saldhig ay nabad-diidku ku lahaayeen halkaasi, iyagoo dilay Labo horjooge, halka tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay.
Qaar ka mid ah Dadka ku dhaqan Danida ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in Ciidanku ay ku suganyihiin Saldhiggii ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgalkan ayaa qeyb ka ah tallaabooyinka ay Ciidanku ku wiiqayaan awoodda Argagixisada kuna xaqiijinayaan ammaanka Waddada isku xirta Degmooyinka Balcad iyo Jowhar.
saldhig ay lahaayeen Al Shabaab